नयाँ प्रविधि बुझ्न क्यान इन्फोटेक : विश्वास | NepalDut
क्यान कास्कीले फागुन ११ देखि १५ गतेसम्म प्रभु पे क्यान इन्फोटेक २०२० आयोजना गर्दै छ । प्रदेशिक तवरमा गर्न लागिएको यो मेलामा काठमाडौंमा हालै भएको क्यान इन्फोटेकमा प्रदर्शन गरिएका सबै नयाँ प्रविधि र सामग्री उपलब्ध हुनेछन् । पोखरा, नयाँबजारको प्रदर्शनी केन्द्रमा हुने इन्फोटेक करिब ५० हजारले अवलोकन गर्ने आयोजकको अपेक्षा छ । मेलाको तयारी र आकर्षणबारे क्यान कास्की अध्यक्ष रुपमांगत भण्डारी विश्वाससँग गरिएको कुराकानी :
क्यान इन्फोटेक क्यान कास्कीको नियमित कार्यक्रम बनेको छ । यसको खास औचित्य चाहिँ के हो ?
क्यान महासंघले गर्ने महत्वपूर्ण इभेन्ट हो क्यान इन्फोटेक । वर्षभरि गरिने धेरै क्रियाकलापमध्ये यो मेगा इभेन्ट हो । २०६५ सालमा हाम्रो संस्था स्थापना भएपछि मोफसलमा हामीले लगातार मेला आयोजना गरेका छौं । यसपालिको मेला फागुन ११ देखि १५ गतेसम्म पोखरा नयाँबजारको प्रदर्शनी केन्द्रमा हुँदै छ ।
यसपालिका विशेष आकर्षण के छन्, जुन हेर्न दर्शक क्यान इन्फोटक आउनुपर्छ ।
सूचना प्रविधि एकदमै परिपर्तनशील छन् । हरेक आइसिटी भर्सनमा नयाँ प्रविधि र नयाँ उत्पादन बजारमा आइरहेका हुन्छन् । इन्फोटेक मेलाको मुख्य उद्देश्य भनेको अघिल्लो वर्षको मेलापछि यो मेलासम्म के के परिवर्तन भयो भनेर देखाउनु हो । नयाँ उत्पादन लिन चाहने उपभोक्तालाई एकै छानामुनि सबै उत्पादन प्रदर्शन गर्नु र एकदमै सुलभ मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउनु पनि यसको विशेषता हो ।
यसपालि थप भएका इभेन्टहरु केही छन् ?
प्रविधिमा द्रुततर परिवर्तन भइरहेको छ । क्यान महासंघ केन्द्रले २६ औं क्यान इन्फोटक काठमाडौंमा गरिसकेको छ । त्यहाँ विश्व बजारमा आएका नयाँ प्रविधि र उत्पादन त्यहाँ प्रदर्शन हुन्छन्, त्यो प्रदर्शनीपछि त्यहाँ भएका सबै उत्पादन र प्रविधि यहाँ आउँछन् । यहाँका सबैलाई प्रविधिबारे बुझ्न र किन्न काठमाडौं जान फुर्सद पनि छैन । त्यहाँको मेलाका सबै आकर्षण पोखरासम्म हामी ल्याउँछौं । त्यहीको मूल्यमा यहाँ उपलब्ध हुन्छन् ।
सूचना, प्रविधिबिना अहिले कुनै क्षेत्र चल्न सक्ने अवस्था छैन । यहाँका विभिन्न तहका सरकारहरुले क्यानसँग सहकार्य गरेका छन् त ?
म ८ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु । सरकारी तवरबाट पछिल्लो २ वर्षमा केही कदम चालिएको छ । पछिल्लो कदम जस्तो पहल अलि पहिला भएको भए, हामी निकै अघि बढिसक्ने थियौं ।
अलिहे हामी नयाँ प्रविधि र उत्पादन नल्याए हामी दर्शक, उपभोक्तासम्म जान सक्दैनौं । सरकारले सूचना प्रविधिबारे केही काम गर्दै छ । आइटी पार्क बनाउने कुरा छ । त्यसमा पनि क्यान महासंघसँग पनि सहकार्य भएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्कमा पनि हाम्रो सुझाव सरकारले मागेको थियो । यो क्षेत्रमा वर्षभरिमा गर्न सकिने कामबारे हामीले सुझाव दिएका थियौं । प्रदेश सरकारसँग मिलेर हामीले सूचना प्रविधि दिवस पनि मनायौं ।
११ औं महोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा १० औं शंखलासम्मका महोत्सवका उपलब्धि के के भए भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
सुरुका मेलामा हामीलाई निकै चुनौति थिए । कुन उत्पादन र प्रविधि ल्याउने भन्ने थियो । त्यो बेला सूचना, प्रविधिमा परिवर्तन ढिलो हुन्थ्यो । अहिले इन्फोटेकमा जाने वर्ग शिक्षित हुन्छ । केही बुझेको वर्ग थप बुझ्नका लागि मेला आउँछ ।
विगतका मेलामा बिक्री, वितरणलाई जोड दिइन्थ्यो । अहिले यसलाई एक्स्पोको रुपमा अघि बढाएका छौं । टन्नै ल्यापटप राखेको रहेछ, पोहोेर पनि थियो, यसपालि पनि त्यही रहेछ भन्ने सतही बुझाइ पनि होला कतिपयमा । वास्तवमा हामीले राख्ने सामग्रीमा परिवर्तन त छ नै । त्यो प्रोडक्टभित्रको प्रविधिमा परिवर्तन छ । अहिले मोवाइलमा धेरै काम गर्न मिल्छ । केही वर्ष पहिले कल गर्नमात्र मिल्ने मोवाइल बिक्थे । भावी दिनमा अझ धेरै विशेषता भएका मोवाइल आउँलान् ।
यो मेला फरक तवरको मेला हो । गीत गाएर, कमेडी देखाएर मान्छेको भीड जम्मा गर्ने हाम्रो लक्ष्य होइन । सूचना, प्रविधिबारे चासो राख्ने र केही बुझेकालाई थप बुझाउनु हाम्रो ध्येय हो । केही न केही सूचना, प्रविधिको ज्ञान भएका मानिस हाम्रो लक्षित वर्ग हो । सञ्चारमाध्यममार्फत हामी त्यो वर्गमा पुगिरहेका छौं । गत वर्षदेखि विद्यालय स्तरीय आइटी क्विज कन्टेस्ट छ । यसमा प्रथम पुरस्कार २५ हजार, दोस्रोलाई १५ र तेस्रोलाई १० हजार दिइनेछ । पोखराका १२ कक्षासम्म पढाइ हुने स्कुलका विद्यार्थीले यसमा भाग लिन सक्नुहुन्छ ।
प्रदेश स्तरीय मेला भन्नु भएको छ , प्रतियोगिताहरु चाहिँ कसरी गरिन्छन् ?
धेरै प्रतियोगिता २ तहमा गरेका छौं । प्रदेशिक मेला भएकाले जिल्ला तहमा उत्कृष्टहरु बीच प्रादेशिक तहमा अर्काे प्रतिश्पर्धा हुन्छ । जिल्ला तहमा हुने प्रतियोगिताका विजयीले पनि आकर्षक पुरस्कार पाउँछन् ।
कास्कीबाहेकका ८ जिल्लामा प्रतियोगिता हुन्छन् । सबै जिल्लाबाट ३ समूह आउँछन् । खुला टाइपिङ प्रतियोगिता पनि हाम्रो आकर्षण हो । यसमा पनि जिल्ला स्तरीय र प्रादेशिक फरक फरक प्रतिश्पर्धा हुन्छन् । टाइपिङ प्रतियोगितामा पुरस्कार प्रथम, दोस्रो र तृतीयलाई क्रमशः डेस्कटप कम्प्युटर, थ्रि इन वान प्रिन्टर र उफर छन् ।
रोबोर्टहरुको प्रदर्शनी पनि हुँदै छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसको रोबोटिक्स क्लबसँग सहकार्य गरी त्यहाँ उपलब्ध भएका सबै मुख्य रोबोर्ट प्रदर्शनीमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौं । ती रोबोर्टबीच पनि प्रतिश्पर्धा हुनेछ । रोबोर्टबीच फुलबल प्रतिश्पर्धा हुनेछ । प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रोलाई क्रमशः ८ हजार, ५ हजार र ३ हजार पुरस्कार दिइनेछ । सहभागी हरेक समूहले २ हजार पाउने छन् ।
यो वर्षबाट आइसिटी स्पिच कम्पिटिसन पनि हुँदै छ । यो ३ शीर्षकमा प्रतिश्पर्धा हुनेछ । आइसिटी सेमिनार पनि यसको आकर्षण हो । काठमाडौंबाट आएको विज्ञ टोलीले आइसिटीबारे सार्थक बहस गर्ने छ ।
यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले परिपक्व भएको महसुस गरेका छौं । पहिले स्पोन्सर खोज्न गाह्रो थियो । अहिले स्पोन्सरहरु मेलाबारे चासो राखेर आउनुभएको छ । सबैजसोले माथिल्लो तहमा स्पोन्सर बन्न चाहनुभएको छ । स्टलहरु आकर्षक बनाइदिनेछ । एक्स्पोको रुपमा विशेष आकर्षक स्टल बनाउँदै छौं । ३५ वटा उपसमिति र मूल आयोजक समिति छ । सबैले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन् ।
हाम्रा करिब सबै स्टल बुकिङ भइसकेका छन् । प्रतियोगिताहरु भइरहेका छन् । हामी अब सूचना, प्रविधिका पारखी र बुझ्न चाहने जमातलाई स्वागत गर्न तम्तयार छौं ।
दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
दर्शकले मेलामा यो चिज चाहिएको छ भन्ने भन्दा पनि ज्ञान लिन आउने हो । हामी सामान बेच्नभन्दा सूचना, प्रविधि बुझाउन लागेका छौं । विद्यार्थी, अभिभावकलाई हामीले बढी जोड दिएका छौं । हामीले टिकट पनि अनलाइन नै गरेका छौं । प्रभुपेबाट टिकट काट्न सकिन्छ ।
मेलामा आउने दर्शकलाई डोरप्राइज, डेली प्राइज, आइटीका विभिन्न प्रश्नहरु राखेर पनि हामी पुरस्कृत गर्ने छौं । सूचना, प्रविधि बुझ्ने, आफन्त, साथीभाइलाई बुझाउने, सस्तोमा लेटेस्ट प्रविधिका सामग्री खरिद गर्ने अपूर्व अवसर हो यो मेला । हामी यहाँहरु सबैको सहयोग, सल्लाह, रचनात्मक सुझावको अपेक्षासमेत गर्दछौं ।